Dagaalo lagu Hoobtay oo 2-dii maalin ee u dambaysay kasocda duleedka Gonder. | ogaden24
Dagaalo lagu Hoobtay oo 2-dii maalin ee u dambaysay kasocda duleedka Gonder.
Nov 22, 2016 - Aragtiyood
Dagaalada u dhexeeya ciidamada Taliska Woyanaha iyo maleeshiyaadka wax iska caabinta Amxarada ayaa lagu soo waramayaa inay sii xoogaysanayaan maalin ba maalinta kadambaysa.
Warku waxaa uu sheegayaa in ciidamada Woyanuhu Geeyeen deegaamada Waqoyiga iyo Bariga magaalada Gonder kumanaan ciidamo Gurmad ah, waxayna ciidamadaasi Fooda si dareen maleeshiyaadka wax iska caabinta Amxarada oo horay halkaasi ay ugu dagaalameen ciidamadii Woyanaha ee sii Joogay.
Maalin nimadii shalay oo kaliya ayaa waxaa dhacay 5 dagaal oo aad u cuslaa waxaana dagaaladaasi khasaare xoogan lagu Gaadhsiiyay cidamada Taliska Woyanaha, sida ay baahiyeen shabakadaha kala duwan ee Taageera kacdoonka Qomiyada Amxarada ee kadhanka ah maamulka kooxda TPLF.
Sida warku sheegayo maleeshiyada wax iska caabinta Amxarada oo Taageera buuxda kahelay shacabka deegaanka, ayaa Gubay tiro kamida Gaadiidkii dagaal ee ciidamada Woyanuhu wateen waxayna arintaasi Niyad Jab kuriday ciidankii Woyanaha oo si fudud uga baxay Goobihii dagaalka.
Tan iyo bilowgii bishan ayaa waxaa inta badan dhulka Amxarada Gaar ahaan Gobolka Gonder kasocday dagaalo lagu Hoobtay oo u dhexeeyay maleeshiyaadka kala duwan ee Qomiyada Amxarada iyo ciidamada Woyanaha, waxayna dagaaladu kusii fidayaan deegaamo hor leh oo kamida dhulka Amxarada.